ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဂီတစာကြည့်တိုက်မှအခမဲ့ mp3 သီချင်းကို download လုပ်ပါ Androidsis
Francisco Ruiz | | အခမဲ့ဂီတ, NOTICIAS, လဲ tutorial
သင်ရှာနေပါတယ် အခမဲ့ဂီတဒေါင်းလုပ်အက်ပ်? အခြားအခြေအနေများတွင်၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတစ်ဆင့်ချင်းသင်ကြားပေးမည့်ဗီဒီယိုတင်ဆက်မှုဖြစ်သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဂီတစာကြည့်တိုက်မှအခမဲ့ mp3 သီချင်းကို download လုပ်ပါ, You Tube ဂီတဗီဒီယိုစာကြည့်တိုက် မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်အရာမဆိုဂီတစာကြည့်တိုက်။
ဂူဂဲလ်ပိုင်ဗီဒီယိုရုပ်သံလိုင်းဖြစ်သော You Tube ၏မကြာသေးမီကပေါ်လစီများအရအခြားအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ် ပြော၍ အလေးပေးပြောကြားသည်။ အသွားအလာကိုသင် Tube မှအခြားဝက်ဘ်စာမျက်နှာများသို့လွှဲပြောင်းပေးသည်ဟုယူဆရသောဗွီဒီယိုများကိုဤကိစ္စတွင်ကဲ့သို့ခွင့်မပြုပါသို့မဟုတ်လူကြိုက်များသောဗီဒီယိုချန်နယ်တွင်လက်ခံထားသောအကြောင်းအရာ၏အခြားတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ချပလီကေးရှင်းများသို့။ ဒါကဒီဆောင်းပါး၊ ဆောင်းပါး၊ လက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာအားလုံးကိုငါပြောပြမယ်၊ ငါတို့လိုချင်တာလား၊ တေးဂီတကိုအခမဲ့ mp3 download လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမီဒီယာစာကြည့်တိုက်မှ
အခမဲ့တေးဂီတကို mp3 နှင့်လုံးဝလုံခြုံသောနည်းလမ်းဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
ရရ မည်သည့်မိုဘိုင်းစက်၊ ကွန်ပျူတာ (သို့) တက်ဘလက်အတွက်မဆိုလုံခြုံသော၊ အရည်အသွေးနှင့်ခိုင်မာသောနည်းလမ်းဖြင့် mp3 မှသီချင်းများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါကျွန်ုပ်တို့ Youzik.com ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သာသွားရပါလိမ့်မည် ဒီတူညီတဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်ရင်.
ပြီးခဲ့သည့် link ကိုနှိပ်ပြီးလျှင်အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပြလိမ့်မည်။
အခုငါတို့လုပ်ရမယ် ဗွီဒီယိုတစ်ခုရှာသည်ဟုဆိုသည့်အနီရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဝင်းဒိုးအသစ်ပြရန်:
ယခု၊ အထက်ပါပူးတွဲပါပုံတွင်သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း mp3 ၌အခမဲ့သီချင်းများကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ သို့မဟုတ် အနုပညာရှင်သို့မဟုတ်သီချင်းအမည်ဖြင့်စာသားရှာဖွေမှုလုပ်ခြင်း ငါအလန်ဂျက်ဆင်နှင့်ပြုသကဲ့သို့ သို့မဟုတ် You Tube တွင်တင်ထားသောဗီဒီယို၏ URL ကိုတိုက်ရိုက်ရိုက်ပါ ထိုသီချင်းသည် mp3 format ဖြင့်သီချင်းကိုအခမဲ့ download ရယူလိုသည်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ၏နာမကိုအမှီထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် အားလုံးအချိန်၏အကြီးမြတ်ဆုံးဂီတအနုပညာရှင် Alan Jacksonစာမျက်နှာသည်ကျွန်ုပ်အား၎င်းတို့အနက်မှရွေးရန်အချို့သောရလဒ်များပေးထားသည်။
အပေါ်ကပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါ့ကိုပေးတဲ့ option ကိုငါနှိပ်လိုက်တယ် အလန်ဂျက်ဆင် Chattahoochee နှိပ်လိုက်ရင်၊ ဒီရလဒ်တွေပြန်ရလာတယ်။
အခုတော့လုံလောက်ပါပြီ စာမျက်နှာ၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်တွေ့ရသောတိမ်တိုက်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ ရွေးချယ်ထားသောသီချင်းသို့မဟုတ်သီချင်းကိုအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဖြင့် download လုပ်ရန်ရရှိသည့်ရလဒ်တစ်ခုချင်းစီ၏ဘေးတွင် -
အပေါ်ကပုံဘယ်လောက်အောက်ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာဘယ်လိုမြင်နိုင်မလဲ၊ ကျွန်ုပ်ဂူးဂဲလ်ခရုမ်းဘရောင်ဇာမှ MAC ရှိလုပ်ပုံ။ download, စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းအောင်မြင်စွာပြီးစီး နှင့်သီချင်းကိုကျွန်ုပ်၏ downloads ဖိုင်တွဲတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
အခုရိုးရိုးလေးပါ ယခု၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ Android terminal သို့၊ ကျွန်ုပ်၏ Android Tablet သို့လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါပြီ ကျွန်ုပ်၏ MAC မှကျွန်ုပ်၏ iTunes ဂီတစာကြည့်တိုက်သို့ထည့်ရန်၎င်းကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ။
ငါဒီလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာကိုတတ်နိုင်သမျှလုပ်ခဲ့ပေမယ့် post ရဲ့အစမှာငါဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့လဲ အခမဲ့သီချင်း mp3 ကျွန်ုပ်၏ MAC မှသင်သည်၎င်းကို Android ဖုန်းများသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာရှိမည်သည့် operating system တွင်မဆိုပြုလုပ်နိုင်ပါသည် သင်ရရန်ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာတစ်ခုသာလိုအပ်လိမ့်မည်.
ဒီတော့ဒီရိုးရှင်းတဲ့နည်းနဲ့သင်တတ်နိုင်လိမ့်မယ် မင်းလိုချင်တဲ့သီချင်းတွေအားလုံးကို mp3 ရပြီ ၎င်းသည် YouTube ဗီဒီယိုချန်နယ်ပေါ်ရှိဗီဒီယိုပုံစံဖြင့်ထားရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောအခြေအနေနှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်ရှိအနုပညာရှင်အများစုကသူတို့၏ကျော်ကြားမှုအသစ်များကိုမြှင့်တင်ရန်ဤလူကြိုက်များသောဗီဒီယိုရုပ်သံလိုင်းကိုအသုံးပြုသောကြောင့်ခက်ခဲရှုပ်ထွေးသောအရာမဟုတ်ပါ။ ။
ဤနေရာတွင်နှိပ်ခြင်းဖြင့်အခမဲ့ mp3 ဂီတကိုရယူရန် Youzik.com ကိုဝင်ရောက်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဂီတစာကြည့်တိုက်မှအခမဲ့ mp3 သီချင်းကို download လုပ်ပါ
ဒီ site ကအလုပ်မလုပ်တော့ပါ။
ယရှေု SANTOS မှပြန်ပြောပါ
CES တွင် BlackBerry ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကီးဘုတ်ဖြင့်ပြသမည်